Ahoana ny fomba hikorontana amin'ny disertation eo anelanelan'ny sahirana sy ny fivezivezena
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Ahoana ny fomba hikorontana amin'ny disertation eo anelanelan'ny sahirana sy ny fivezivezena
Ny fanoratana dissertation dia dingana mandany fotoana be. Ka ahoana ny fomba fampifangaroana ny fanoratana dissertation amin'ireo zavatra manan-danja hafa toa ny fitsangatsanganana? Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba izany.
Hoy izahay hoe tohizo ary mandehandeha. Any amin'ny oniversite dia manana fotoana betsaka amin'ny fanandramana mivezivezy miavaka ny mpianatra: goavana tokoa ny fahasamihafana amin'ny programa iraisam-pirenena. Na fanabeazana izany, na fanomezana an-tsitrapo, na fanananao fotoana miaraka amin'ny namanao.
Ny traikefa iraisam-pirenena dia toa lavorary amin'ny tohin'ny nahazo diplaoma. Fanabeazana na asa voalohany any ivelany dia zava-mahagaga. Ny traikefa toy izany dia iray amin'ireo fitaovana sarobidy amin'ny fandresena ireo mpifaninana aminao na aiza na aiza alehanao.
Raha dissertation no ahinao, dia misy toro-hevitra hanampy anao amin'ny fanasokajiana hetsika maro.
Dingana 5 hanatanterahana disertation eny ivelan'ny Campus
Order sy drafitra.
Mpitsangantsangana mavitrika na olona be atao dia mampiasa fandaharam-potoana sy lisitra. Topazo maso ireo fepetra takiana amin'ny fanoratana thesis. Vakiaho ho:
- Fivoriana sy fanamarihana.
Soraty ny fotoana lanin'ny dingana tsirairay. Ampifanaraho amin'ny hetsika ataonao ary avereno jerena tsy tapaka raha toa ka tonga ara-potoana. Sahirana ve ianao vao manomboka? Zahao ohatra ny famelabelaran-kevitra momba ny aingam-panahy.
Fahombiazana amin'ny fampahalalana fanampiny.
Manaova lisitry ny loharanom-pahalalana mifanentana amin'ilay lohahevitra. Mieritrereta amin'ny famoronana. Matetika, olona be atao sy mpivoaka dia manana fifandraisana marobe eo an-tanana, ary noho izany ny fitambaran'ny angon-drakitra sy ny mombamomba azy.
Voalohany, manaova famerenam-bidy momba ireo loharano voatanisa ho an'ilay dissertation. Anontanio ireo mpampianatra na mpanampy raha ilaina sy sarobidy ireo fitaovana ireo. Aza mandany ny fotoananao amin'ireo mahazo hevitra ratsy.
Mety hisy dikany ve ny fiarahamonina amin'ilay dissertation? Manaova fanadihadiana amin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera mora ary alefaso amin'ny olona mifandray aminao. Azavao ny antony maha-zava-dehibe ny fanampiana sy famenon'izy ireo izany. Ny fomba fiaina nomad dia afaka mandray soa betsaka amin'ny fikarohana ataonao. Aza hadino ny misaina amin'izay alehanao. Mankanesa any amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany momba ny angona raha toa ka mihatra amin'ny fikarohana ataonao.
Famakafakana sy fiasa ara-potoana.
Raha tsy maharaka ny fandaharam-potoananao ianao dia tonga ny fotoana hitsikerana ny fandaharam-potoanao. Raha sendra iray volana ratsy fotsiny ianao ary tapa-kevitra ny hahatratra, mandrosoa ary mazotoa.
Raha tsy izany dia mitadiava zava-misy. Tsy misy kisendrasendra afaka hahafahanao manatanteraka ny fanoratana thesis ao anatin'ny herinandro alohan'ny fe-potoana farany. Tsy hisy soa hivoaka amin'ity hevitra ity.
Mividiana disertations avy amin'ny serivisy manome fanampiana azo itokisana. Mandefasa ampahany iray tsy azonao arakaraka ny fe-potoana farany nomenao. Manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny izany.
Hevitra ratsy ny mangataka andro mandrapahatongan'ny fe-potoana ary mangataka olona hanoratra haingana ny thesiso. Ny disertation dia tsy sanatria lahatsoratra lehibe fotsiny, fa ny fikarohana lalina izay mety hisy fiantraikany amin'ny asanao amin'ny ho avy.
Avereno jerena ny safidinao.
Mikasa ny ho any andafy ve ianao? Jereo raha afaka misoratra anarana amin'ny ivon-toeram-pikarohana andrim-panjakana ianao ary miasa amin'ny disertation avy any. Mifandraisa amin'ny anjerimanontolo raha mila fampahalalana bebe kokoa sy safidy. Angamba afaka manolotra karazana diplaoma avo roa heny amin'ny firenena samihafa izy ireo.
Mety hainao tsara ny mampiasa izay tsara indrindra amin'ny fampahalalana, saingy fampahatsiahivana fotsiny ny fahalianana amin'ny fanabeazana ihany koa.
Jereo raha toa ny hetsika ataonao sy ny zavatra niainanao afaka mamorona fanamarihana marim-pototra ho an'ny diary nataonao. Rehefa mikaroka zavatra tena tianao ianao dia mamela ny famitana haingana ny fizotrany ny fiara.
Manana drafitra B hatrany.
Eritrereto raha daty marina rehefa tokony ho vonona ny volavolan-dahatsoratra. Manaova fikarohana mialoha ny loharano azo antoka, jereo Paperial ho an'ny fanoratana dissertation. Manokà teti-bola D tsy azo kitihina B.
Mila taona maro vao mamorona fifandanjana amin'ny asa aman-draharaha tonga lafatra. Ny fanehoana ny tenanao amin'izao tontolo izao azo atao avy amin'ny oniversite dia manome traikefa sarobidy. Mety tsy ho tonga intsony ny fotoana manaraka. Na izany aza, mila mitsikera ny safidy nataonao ianao.
Na manao ahoana na manao ahoana fahafinaretana eo amin'ny fiainanao ianao, tsy misy mandratra olona na oviana na oviana ny drafitra.
Ny fomba fiaina mavitrika dia manamora ny fizotran'ny fahazoana diplaoma
Ny fitarihana fiainana mavitrika dia manokatra fomba iray amin'ireo fanambarana vaovao. Tsy zavatra ratsy velively izany rehefa manao fikarohana siantifika ianao. Na dia a PhD diplaoma no tanjonao lehibe indrindra amin'ny fiainana, aza atsahatra ny hetsika ataonao mba hidirana amin'ny tranomboky.
Ny fanavaozana dia avy amin'ny fiarahamonina. Rehefa dinihina tokoa, ny fikarohana mivoatra dia azo avy amin'ny filàna ara-tsosialy. Ny fanandramana mavitrika dia mety hitarika amin'ny zavatra hita mahasoa.
Mampifandray an'i Phnom Penh sy Bangkok amin'ny serivisy isan'andro avy any Dubai ny Emirates
IATA dia manentana ny governemanta amerikana, ny indostria, hiara-hiasa hampitombo ny tombotsoan'ny fiaramanidina
Niantso ny Minisitra G7 ny CEO CEO London Heathrow: sokafy ny lanitra!